सांसद मेटमणी चौधरीको ठगी « Tulsipur Khabar
न गाउँ आउँछन्, न फोन उठाउँछन्
तुलसीपुर, १७ मंसिर । संघिय सांसद मेटमणी चौधरीलाई गाउँ छिरेमा बाँधेर पल्टाउने स्थानीयबासीले बताएका छन् । निर्वाचनको समयमा सांसद चौधरीबाट दर्जनौ व्यक्तिहरु ठगीएपछि राप्ती गाउँपालिकाका स्थानीयले बाँधेर पल्टाउने बताएका हुन् । २०७४ मंसिरमा भएको संघिय निर्वाचनमा दाङ निर्वाचन क्षेत्र नं. १ बाट निर्वाचित चौधरीले दर्जनौ होटेल, पसल र व्यक्तिलाई ठगी गरेको स्थानीय श्रीकिरण चौधरीले बताउनुभयो ।
पिडित व्यक्तिहरुका अनुसार राप्ती गाउँपालिका–६ पथरगडवा चोकमा रहेको टिफीन टाइम होटेलमा १९ हजार पाँचसय, जीवराज पोल्ट्रि फर्ममा २१ हजार, रामबहादुर पोल्ट्रि फर्ममा १४ हजार, निमराज किराना पसल खाद्यन्न एण्ड गल्ला पसलमा १३ हजार पाँचसय, हरिचन्दर चौधरीको घरबाट बंगुर लगेको २९ हजार र चुनावमा गाडी प्रयोग गरेको ३५ हजार रुपैयाँ सांसद चौधरीले तिर्नुपर्ने छ । अधिकांस ठगीने वर्ग निम्न र थारु समुदायका रहेका छन् ।
‘विपन्न वर्गको घरबाट कुखुरा, बंगुर, चामल लगेर पैसा नतिर्ने व्यक्तिले गाउँको विकास गर्छ ? यसले जनताको हित गर्छ ?,’ एक स्थानीयबासीले नाम नबताउने सर्तमा भने यसले बजेट माग्न जाँदा एक लाखको ७ प्रतिशत कमिसन् माग्छ ।’
बोलाउँदा गाउँ पनि नजाने र फोन गर्दा फोन पनि नउठाउने गरेको पिडितको भनाई छ ।
सांसद चौधरीले भने : ऋण तिरौंला नी
यता संघिय सांसद चौधरीले चुनाव लड्दा ऋण लागेको र त्यो तिर्ने बताउनुभयो । ‘चुनावको ऋण थपिरहन्छ । गुनासो आउँछ । ऋण लाग्छ तिरौंला नि ।’ संघिय सांसद चौधरीले भन्नुभयो । तर कहिलेसम्म तिर्ने भन्ने प्रश्नको जवाफ भने चौधरीले दिनुभएन । स्थानीयका अनुसार अन्यत्र क्षेत्रमा पनि निर्वाचनको समया चौधरीको लाखौं ऋण रहेको छ ।